09/01/2018 - Page 2 sur 3 -
Antsirabe : Mpivaro-kena voaroba 2 tapitrisa Ariary
Nitrangana fanafihan-jiolahy mitam-piadiana tao amin’ny fokontany Ambalakisoa Bemasoandro Antsirabe I, lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny vola 2 tapitrisa Ariary. Ny alahady lasa teo tokony ho tamin’ny 12 ora alina no voalaza fa nitontonan’ny jiolahy ny tokantranona …Tohiny
Simba ny ankamaroan’ny fotodrafitrasam-pampianarana vokatry ny fandalovan’ny rivodoza AVA. Araka ny tatitra vonjimaika avy tamin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Dren 6, Cisco 19 ahitana sekoly 151 no voakasiky ny fahasimbana. Efitranon-tsekoly miisa 128 kosa no simba tanteraka, …Tohiny
Tsy misy afa-tsy ny firotsahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana ho avy io no antoky ny fitohizan’ny fampandrosoana efa napetrany tao anatin’izay fotoana nitondrany ny firenena izay, hoy ny depiote Nicolas Randrianasolo mpikambana ao anatin’ny …Tohiny
Ny alahady teo no nigadona teto Madagasikara ny Tale Jeneralin’ny OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Izao no fitsidihana voalohany, taorian’ny nahalany azy ho Dg Oms ny volana mey 2017. Noraisin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha …Tohiny
Nandray fanapahan-kevitra manoloana ny loza mitatao ho an’ny fandriampahalemana sy ny filaminam-bahoaka ny Prefektioran’Antananarivo ka nanafoana ny fahazoan-dalana fanamarihana ny faha-15 taonan’ny antoko TIM nokasaina hatao etsy Mahamasina. Fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ho fanamarihana io tsingerin-taona io ...Tohiny